Zvimiro zvesirina firita chinhu
ne admin pane 20-10-11
Stainless simbi firita zvinhu zvakapatsanurwa kuita pleated firita zvinhu, uye sintered pajira riya firita element.We tinosuma hunhu hwesimbi simbi firita zvinhu. Hunhu hwesimbi firita chinhu ndeichi: inogona kushandiswa pasi pekupisa kwakanyanya uye kumanikidza kwakanyanya; suitab ...
Maitiro ekuita kuti kambani yako ikure zvakatsiga nemakwikwi epamusoro gumi Kuti chero kambani ikure zvine mutsigo uye zvakadzikama, inofanira kukudziridza yayo yepamoyo kukwikwidza. Musimboti wekukwikwidzana webhizinesi pakutanga unoratidzwa mune chaiwo hunyanzvi. Musimboti wemakwikwi we ...
Kuchengetedza uye kugadzirisa kwefaera michina
Kuchengetedza nekuchengetedza mashandisirwo emidziyo yefaera: Usati washandisa firita isina simbi, unofanira kutarisa kuti zvishongedzo nekuisa zvindori kwakakwana here uye kuti zvakakanganisika here wozozviisa sezvinodiwa. Sefa nyowani inofanirwa kucheneswa nesipo (ndapota don̵ ...
Kushanda kwesimbi isina tsvina firita chinhu mucoalescer
Stainless simbi firita chinhu chakakamurwa kuita skrini firita chinhu, sintered akanzwa firita chinhu uye sintering firita chinhu. Iyo yakasvibirira sintered mesh firita chinhu chakagadzirwa nesimbi isina sintered sintered mesh. Stainless simbi firita chinhu chinoshandiswa mune dzakasiyana-siyana kusefa michina ku ...
Isimbi isina kuchena firita yezvigadzirwa @ dense skrini yekuchenesa
Iyo firita chinhu chinogadzirwa neasina simbi firita element inogadzira ine akasiyana maficha, uye zvigadzirwa zvakawanda zvinoshandiswa sefaera midhiya. Iyo firita chinhu chinogadzirwa neyechinyakare isina simbi firita chinhu chemugadziri chakagadzirwa newaya mesh; dzimwe nguva pakati pechidzitiro ...
Isu tese tinoziva kuti isina simbi firita element haina chete ine yakanaka ngura kuramba, asi zvakare ine chitarisiko chakanaka uye mamwe maitiro. Iyo yekushandisa renji yesimbi isina chinhu inowedzera uye yakawedzera, uye inogona kuonekwa kwese kwese muhupenyu hwedu. Ndeapi hunhu hwesina ...